ग्रामीण पर्यटनमा छलाङ मार्दै घलेगाउँ | गृहपृष्ठ
Home समाचार ग्रामीण पर्यटनमा छलाङ मार्दै घलेगाउँ
कात्तिक २१, लमजुङ । प्रदेश नं. ४ अन्तर्गत लमजुङको क्व्होलासोँथर गापा–३ मा पर्ने घलेगाउँ समुद्र सतहबाट २१ सय मिटर उचाईमा छ । काठमाडौंबाट १ सय ७५ किलोमिटर र सदरमुकाम बेसीशहरबाट २७ कि.मी. पश्चिम–उत्तर दूरीमा अवस्थित सार्क राष्ट्र पर्यटकीय गाउँ घलेगाउँले लमजुङको पर्यटन प्रबद्र्धनको क्षेत्रमा अग्र स्थान कायम गरेको छ ।
१ सय १५ घरधुरी रहेको घलेगाउँमा एकघर बाहून, २४ घर दलित र बाँकी सबै गुरुङ छन् । वि.सं. २०५७ सालदेखि यस गाउँलाई ग्रामीण पर्यटकीय होमस्टे गाउँको रुपमा स्थापना गरिएको हो । घलेगाउँबाट माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, हिमालचुली, मनास्लु, लमजुङ, बौद्ध लगायतका हिमश्रृङ्खलाको मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ ।
करीब ८० घरमा पाहुना राख्ने आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिएको छ । ३२ घरमा व्यवसायीक होमस्टे सञ्चालित छन् । दुईदेखि आठ जनासम्मलाई एउटै घरमा बास गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । एकरातमा करीब ३ सय पाहुनालाई घलेगाउँले खुवाउन र सुताउने क्षमता राख्छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने यो गाउँ करीब सातसय वर्ष पुरानो मानिन्छ । लमजुङको सदरमुकाम वेसीशहरबाट कच्ची मोटरबाटोको यात्रासँगै करीब साढे दुई घण्टामा घलेगाउँ पुगिन्छ । परम्परागत गुरुङ संस्कृति, घाँटु, सोरठी, सेर्गा लगायतको नाचले स्वागत गरिने सो गाउँ वरिपरि नमूना चियाबगान, भेडीगोठ, भ्यूटावर, उत्तरकन्या मन्दिर, पिकनिक पार्क त्यहाँ अवलोकन गर्ने आकर्षक स्थान हुन् । प्रकृतिको एक टुक्रा जस्तो लाग्ने घलेगाउँ, त्यहाँका होमस्टेको बसाईले पर्यटकदेखी होमस्टे सञ्चालकहरु, अध्ययनकर्ताहरुलाई समेत निकै आकर्षण तुल्याइरहेको छ ।
न्यानो आतिथ्यताका माध्यमबाट घलेगाउँमा गरिने परम्परागत संस्कृति, रहनसहन तथा मौलिक उत्पादन तथा सेवाले पर्यटकलाई होमस्टेले आकर्षित गरेको छ । गाउँमा यातायातको सुविधा भएपछि पर्यटक सिधै होमस्टेका लागि पुग्ने गरेका छन् ।
२०५७ सालबाट होम स्टे सञ्चालनमा आएको घलेगाउँमा ३२ घरले नियमित सेवा दिइरहेका छन् । घलेगाउँमा हाल दैनिक ३ सयभन्दा बढी पाहुनालाई सेवा दिन सक्ने क्षमता रहेको समितिले बताएको छ । घलेगाउँमा पर्यटकको आगमनसँगै स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक स्तर पनि उकासिँदै गएको छ ।
समितिका अध्यक्ष घले भन्छन्, ‘होमस्टेमा आउने पर्यटकलाई खानाका लागि स्थानीय परिकारकै प्रयोग छ, होमस्टेमा वाईफाई जडान भएका छन, पर्यटकले प्रयोग गर्ने कोठाहरु सफा र आरमदायी छन्, सबै होमस्टेहरु मापदण्ड अनुसारकै छन् ।’
‘परालका गुन्द्रीमाथि गाउँमै बुनेका राडी र गलैंचामा पलेटी मारेर पारिवारिक वातावरणमा खानपिन गर्दा साँच्चै रमाइलो अनुभूति हुन्छ,’ घलेगाउँ गोरखाका गणेश गुरुङले भने, ‘अंगेनाको वरिपरि लहरै पाहुनालाई बसाएर रोजेको परिकार पकाइदिने र बातमार्दै त्यसको स्वादले कस्को मन आनन्दित नहोला ।’ स्थानीय मस्र्याङ्दी नदीको माछा, भेडीगोठका भेडा, च्याङग्र्रा, खसी, लोकल कुखुराको मासु, भेडा र माछाको सुकुटी, कोदोको घरैमा उत्पादित रक्सीको स्वाद्ले पाहुनाको मन हलुङ्गो हुन्छ ।
करीब चारघण्टे मोटरको उकालोबाटो छिचोलेर घलेगाउँ पुग्ने पाहुनाको मन निकै थकित हुन्छ । सो थकान छिनभरमै मेटाउने घलेगाउँबासीसँग अजिवको बुटी छ ।
बिदेशीको तुलनामा आन्तरिक पर्यटकको लर्को
घलेगाउँमा पछिल्लो समय विदेशीभन्दा आन्तरिक पर्यटकको लर्को लागेको छ । विगतमा चिसो मौसममा पर्यटक सङ्ख्या घट्ने गरे पनि यो वर्ष भने चिसोको सुरुवात भएपनि पर्यटक आगमन सङ्ख्यामा कुनै कमी नआएको घलेगाउँ पर्यटन विकास समितिका कार्यालय सचिव दीर्घ घलेले बताए ।
‘जाडो समय भए पनि घलेगाउँ आउने पर्यटकको दर बढेको छ, दैनिक २ सय ५० देखी ३ सयको हाराहारीमा आन्तरिक पर्यटक घलेगाउँ आउँछन् । बाह्य पर्यटकको आगमन भने १५ प्रतिशत मात्र छ,’ उनले भने । वेसिजनमा १५, २० जना आउने गरेपनि सिजनमा भने, दैनिक २ सय देखी ३ सय पर्यटक भित्रने गरेका छन् ।
असोज र कार्तिक महीनामा भने घलेगाउँमा पर्यटक थामिनसक्नु भएको सचिव घलेले जानकारी दिए । चालू आव २०७४/०७५ अन्तर्गत साउन महीनादेखी असोज मसान्तसम्म ३ महीनामै १५ सय ५६ जना आन्तरिक पर्यटक घलेगाउँमा पुगेका छन् । बाह्य पर्यटकको तथ्याङ्क हेर्दा २ सय जना बाह्य पर्यटक घलेगाउँ भित्रिएका छन् ।
समितिले राखेको तथ्याङ्कमा सिजन र बेसिजनमा गरी गत आव २०७३/७४ मा १० हजार १ सय ७५ जना आन्तरिक पर्यटक घलेगाउँ पुगेका थिए । बाह्य पर्यटक भने ५ सय १४ जना पुगेको सचिव घलेले बताए । यो कार्तिक महीनामा समेत आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या थामिनसक्नु भएको उनले जानकारी दिए । चाडपर्वको विदा मनाउन आउने बढी भएकाले यो सिजनमा पर्यटक राख्नै समस्या भएको समेत उनले बताए ।
पर्यटक लोभ्याउने चिया बगान
पश्चिमाञ्चलमा पहिलोपटक शुरु गरिएको लमजुङको चियाखेतीले पर्यटकलाई समेत आकर्षण गर्न थालेको छ । घलेगाउँ क्षेत्रमा लगाइएको चिया बगानले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लोभ्याउने गरेको हो । पछिल्लो समय बगान हेर्नकै लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेको घलेगाउँकी बासिन्दा ललीता गुरुङले बताइन् ।
हिमालकै काखमुनि रहेर चियाबारीमा रमाउन सार्क राष्ट्रकै नमूना ग्रामीण पर्यटकीय घलेगाउँ पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य स्थल बनेको छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इलाका संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भुजुङको पहलमा २०५५ सालदेखि घलेगाउँमा चियाखेती शुरु गरिएको हो । जुन अहिले ७० रोपनी बढी क्षेत्रमा फैलिसकेको छ । चियाखेती विस्तारका लागि जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयले समेत सहयोग गरेको छ । यहाँ उत्पादित चिया गाउँमा आएका पर्यटकका लागि र गाउँ बाहिर रहेका आफन्तजनलाई कोसेलीका रुपमा पठाउने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
पर्यटक तान्दै पर्यटन सङ्ग्रालय
घलेगाउँमा निर्माण गरिएको पर्यटन सङ्ग्रहालयले पनि पर्यटकलाई आकर्षित तुल्याएको छ । घलेगाउँ पुग्ने अधिकांश पर्यटक सङ्ग्रहालयमा पुग्ने गरेको सङ्ग्रहालय संरक्षण समितिका संयोजक पूर्णबहादुर गुरूङले बताए । सङ्ग्रहालयमा विशेष गरी गुरूङ जातिको परम्परागत पोशाक, हतियार, बाजा, झ्यालीलगायतका ऐतिहासिक सामग्रीहरू राखिएको छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को २ लाख सहयोग र स्थानीयको जनश्रमदानबाट उक्त सङग्रालय निर्माण गरिएको हो ।
स्थानीय उत्पादनको व्यापार
घलेगाउँमा घरमै पालेका लोकलकुखुरा र भेडाको व्यापार अधिक छ । ताजा महको व्यापार अझ राम्रो छ । पाहुनाहरुले मनभरको स्वादलिने र आवश्यक लाग्दा किनेर घर लानमिल्ने प्रबन्ध छ ।
गाउँमै बसेर मासिक ४० देखि ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने घलेगाउँका बासिन्दा आर्थिकरुपले तङ्ग्रिदै गएका छन् । आन्तरिकदेखि बाह्य गरी दैनिक करीब दुईसय पचासदेखि तीनसयसम्म पर्यटक घलेगाउँ पुग्ने गर्छन् । सोमध्ये ३० प्रतिशत विदेशी पाहुना आउने गरेको गाउँलेको भनाई छ । गाउँको छेउमै डाँडामा पार्क निर्माणपछि त स्थानीयको रमाइलो पिकनिक स्पट बनेको छ ।
बाटोघाटोको समस्या भएपनि तुलनात्मकरुपमा बाटोको सुधार गरिएको छ । वर्षायाममा बाटो विग्रेर असार र साउन दुई महीना पर्यटक शून्य रहने सो गाउँका अगुवा प्रेम घले बताउँछन् । होमस्टे शुरु भएदेखि गाउँलेहरुलाई बालबच्चाको शिक्षादिक्षामा कुनै कठिनाई नभएको उनको बुझाई छ ।
यो सँगै पर्यटकले उपभोग गर्ने बिभिन्न सामाग्रीहरु फरक फरक घरधुरीले तयार पार्ने गरेका छन् । जसको घरमा होमस्टे छैन उनिहरुले ३२ घरलाई चाहिने स्थानिय मदिरा, मासु, रंगीबिरङ्गि फूल, राडी, पाखी, बख्खु, गलैचा लगायतका वस्तुहरु उत्पादन गरी विक्री गर्ने गर्दछन् । जसबाटै सहज रुपमै आम्दानी गर्ने बाटो खुलेको छ ।
निकै उचाईमा हिमश्रृङ्खलाको काखमा अवस्थित घलेगाउँको झ्यालबाटै मनोरम सेताम्य हिमालको टाकुरा देखिन्छ । गाउँको वरिपरि मनमोहक दृश्यावलोकनका प्राकृतिक हरियाली पहाड, फाँट र गहिँरा खोल्साखोल्सीहरु ।
हरिया चियाबगान, भ्यूटावर, भेडीगोठ, उत्तरकन्या मन्दिर, पोखरी र अन्य सुन्दर प्राकृतिक छटाले मन आनन्दित हुन्छ । माछापुच्छ्रे अन्नपूर्ण, हिमालचुली, मनास्लु, लमजुङ, बौद्ध लगायतका हिमश्रङ्खलाको मनोरम दृश्यले मोहित त्यहाँ आगन्तुक पाहुनाहरु विहानभरी क्यामेरा, मोबाइल, आइफोनमा आफ्ना तस्वीर कैद गरेरै विताउँछन् ।
गाउँ नजिकै डाडाँमा भ्यूटावर निर्माण गरिएको छ । त्यहाँबाट सूर्योदय र सुर्यास्तको राम्रो अवलोकन गर्न सकिन्छ । गाउँबाट हेर्दा चारैतिर देखिने मानववस्तीहरु र साँझको अँधेरीमा देखिने झिलमिल उपत्यका र नागबेली हुँदै बगेको मस्र्याङ्दी नदीको दृश्यले सबैलाई लोभ्याउँछ ।
लमजुङको सदरमुकाम बेँशीशहरबाट मोटरमा २ घण्टामा घलेगाउँ पुग्न सकिन्छ । समुद्री सतहबाट २ हजार १ सय मिटर उचाइमा रहेको घलेगाउँबाट देखिने मनास्लु, अन्नपूर्ण ४, गङ्गापूर्ण, हर्क गुरुङ पिकलगायत हिमालले त्यहाँ पुग्ने जोसुकैलाई लोभ्याउँछ । यसका अलवा घलेगाउँ पुग्ने पर्यटकले उत्तरकन्या मन्दिर, चियाबगान, भेडीगोठसमेत हेर्न पाउँछन् ।